Abebehambele Umhlangano Wezokwelapha KwezeNdabuko.
Umkhakha wase-UKZN WezokweLapha KwezeNdabuko ububambe umhlangano wezokwelapha kwezendabuko ukubungaza usuku LwezokweLapha KwezeNdabuko.
Umhlangano bewubanjelwe e-Nelson R Mandela School of Medicine.
IDini eyiNhloko YeSikole SezobuHlengikazi NezeMpilo Yomphakathi, uSolwazi Mosa Moshabela, ugcizelele ukubaluleka Kwabelaphi beNdabuko(ama-THP) emphakathini, ikakhulukazi KwaZulu-Natal, lapho kunama-THP amaningi okudlula imtholampilo. ‘Ukusebenzisana phakathi kwalezi zinhlelo ezimbili kungaholela ekunakekelweni kwezempilo okungcono kweziguli,’ usho kanje.
Lo mhlangano, obuhanjelwe abelaphi, izifundiswa nabasebenza emkhakheni wezempilo baseThekwini namaphethelo, ubugubha futhi uhlonipha umsebenzi owenziwe abelaphi bezendabuko eminyakeni eminingi edlule. ‘Umsebenzi wabo uhlanganisa ngokugcwele amakhambi emvelo, nezomoya zobu-Afrika ukuze kutholakale ukwelapheka komzimba, kwengqondo nokomoya kubantu,’ kunezezela uMoshabela.
Abantu abaningi baseNingizimu Afrika basebenzisa abelaphi bendabuko njengendlela yokuzinakekela ngokwezempilo futhi kuwumthombo wempilo kwabanye.
Abafundi abenza iziqu ze-PhD nezeMastazi bethule abakuthole ocwaningweni lwabo kanye/noma iziphakamiso zabo zocwaningo lapho bebekhangisa khona ngomsebenzi abebewenza eminyakeni edlule bebambisene nama-THPs. Abanye balabafundi benza ucwaningo lwaselebhu oluhlola ukusebenza kwemithi yendabuko ekulashweni /ekulawuleni umdlavuza kanye ne-HIV kanye nokunye ukulwisana nanagciwane kwale mithi. Abanye bekungabafundi abenza iziFundo Ngenhlalo Yomphakathi abasebenza kakhulu nama-THP kanye nabahlengikazi abahlenga iziguli zabo.
Omunye wabafundi beziqu ze-PhD nongumbhali ohlanganyele incwadi: Traditional Medicine at the Cross-Roads in South Africa: challenges faced by its institutionalisation, wethule umsebenzi wakhe ngolimi lwesiZulu, ulimi oluqondwa abelaphi abaningi.
‘Ukuqala kokusebenzisana kwabelaphi kanye neNyuvesi kuyinto eqale kancane ngoba bekunezinselelo kusukela ekuqaleni kwalo msebenzi,’ kusho onguMholi KwezoCwaningo, uSolwazi Nceba Gqaleni. ‘Kodwa sakwazi ukubhekana nazo futhi angingabazi ngomthelela womsebenzi owenziwa yilebhu yemithi yendabuko eminyakeni edlule ukuze kuthuthukiswe, kuhlonyiswe futhi kulondolozwe ulwazi lwendabuko,’ kunezelela uGqaleni. Ubonge bonke abebemenyiwe, ikakhulukazi abelaphi bendabuko abavule izinhliziyo zabo futhi bakhombisa umusa ngokusebenzisana nomkhakha ukuze abafundi baqhubeke nemisebenzi yabo.
Phakathi kwabebemenyiwe bekukhona noNksz Nana Ngobese, uSihlalo we-Eim-Hetep Institute; uMnu Thandonjani Hlongwane, uSihlalo we-eThekwini THP; Mnu Nathi Buthelezi, uSihlalo we-KZN THP Forum; uMnu Vukani Khoza, uMphathi Wezokwelapha KweNdabuko Emnyangweni WezeMpilo WaKwaZulu-Natal; Mnu Bruce Mbedzi, uMqondisi WezoKwelapha KweNdabuko eMnyangweni WezeMpilo KaZwelonke; kanye noDkt Aunkh Chabalala, uMqondisi we-IK-Based Innovations eMnyangweni WezeSayensi NobuChwepheshe.